Bit By Bit - Ethics - 6.6.1 ụbụrụ bụ
Na-eme nnyocha kwesịrị, nwere ike, ma na-eso na-achị: ụdị ụfọdụ nke nkwenye n'ihi na ọtụtụ nnyocha.
Nkwenye a na-amaghị nke ọma bụ echiche dị iche-ụfọdụ nwere ike ikwu na ọ dị nso (Emanuel, Wendler, and Grady 2000; Manson and O'Neill 2007) -nke ụkpụrụ omume. Usoro kachasị mfe nke ụkpụrụ nyocha na-ekwu, sị: "nkwenye ezinyere maka ihe niile." Otú ọ dị, ọchịchị a dị mfe adịghị adabere n'ụkpụrụ ụkpụrụ omume dị ugbu a, ụkpụrụ ụkpụrụ omume, ma ọ bụ omume nyocha. Kama nke ahụ, ndị na-eme nnyocha kwesịrị, nwee ike, ma na-agbaso iwu dị mgbagwoju anya: "ụdị nkwenye maka ọtụtụ nchọpụta."
Nke mbụ, iji mee ka echiche dị mfe karịa nghọta zuru ezu, achọrọ m ịkọrọ gịtakwuo ihe gbasara nyocha nke ubi iji nyocha ịkpa ókè. N'ime nchọpụta ndị a, ndị na-enyocha akwụkwọ adịgboroja ndị nwere ọdịiche dị iche-na-ekwu ụfọdụ ndị ikom na ụfọdụ ụmụ nwanyị-na-etinye maka ọrụ dịgasị iche iche. Ọ bụrụ na otu onye na-achọ ọrụ na-akwụ ụgwọ ọtụtụ ugboro, mgbe ahụ, ndị nchọpụta nwere ike ikwubi na enwere ike ịkpa ókè na nhazi ọrụ. Maka ebumnuche nke isi nke a, ihe kachasị mkpa maka nchọpụta ndị a bụ na ndị na-etinye aka na nyocha ndị ahụ-ndị were ha n'ọrụ - anaghị enye nkwenye. N'ezie, a na-aghọgbu ndị a na-eso ụzọ. N'agbanyeghị nke ahụ, a na-eme nchọpụta ugbo iji nyochaa ịkpa ókè na ihe ọmụmụ 117 na mba 17 (Riach and Rich 2002; Rich 2014) .
Ndị na-eme nchọpụta ndị na-eji nyocha ime nnyocha na-amụ banyere ịkpa ókè na-egosi njirimara anọ nke ọmụmụ ndị a, nke ha na-eme ka ha nwee ike ịhọrọ: (1) nsogbu ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ; (2) uru bara uru dị ukwuu nke ịnwe oke ịkpa ókè; (3) adịghị ike nke usoro ndị ọzọ nke ịkọ nkọ; na (4) eziokwu ahụ bụ na aghụghọ adịghị emebi ụkpụrụ nke ọnọdụ ahụ (Riach and Rich 2004) . Onye ọ bụla n'ime ọnọdụ ndị a dị oké egwu, ọ bụrụ na ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ha na-eju afọ, usoro ikpe ziri ezi ga-esikwu ike. Atọ nke njirimara ndị a nwere ike ịmalite site na ụkpụrụ omume ọma na Belmont Report: nsogbu dị ntakịrị (Nkwanye ùgwù maka ndị mmadụ na uru) na nnukwu uru na adịghị ike nke ụzọ ndị ọzọ (Uru na Ikpe ziri ezi). Ihe njedebe ikpeazụ, nchịkọta nke usoro okwu, nwere ike nweta site na Menlo Report respect for Law and Interest Public. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ngwa ọrụ bụ ọnọdụ ebe ọ dị ugbu a na-atụ anya na ị nwere ike ịghọ aghụghọ. Ya mere, nyocha ndị a adịghị emerụ ala ọdịdị dị mma.
Na mgbakwunye na arụmụka a dabeere na ụkpụrụ, ọtụtụ IRBs kwubiri na enweghị nkwenye na nchọpụta ndị a kwekọrọ na iwu ndị dị ugbu a, karịsịa Iwu Ndị Achịkwa §46.116, akụkụ (d). N'ikpeazụ, ụlọikpe ndị United States kwadoro enweghi nkwenye na iji aghụghọ eme ihe nyocha nke ubi iji tụọ njigide (Nke 81-3029. Ụlọikpe Mkpegharị Ikpe nke United States, Seventh Circuit). Ya mere, ojiji nke nyocha nke ubi na-enweghị nkwenye kwekọrọ n'ụkpụrụ ụkpụrụ omume dị ugbu a na iwu ndị dị ugbu a (ọbụlagodi iwu ndị dị na United States). Ebumnuche ndị a na-akwado nke a site na ọha na eze nnyocha ọha mmadụ, ọtụtụ IRB, na Ụlọikpe Mkpegharị Ikpe nke United States. Ya mere, anyị aghaghị ịjụ iwu dị mfe "nkwenye ziri ezi maka ihe niile." Nke a abụghị iwu ndị na-eme nnyocha na-eso, ọ bụghịkwa otu nke ha kwesịrị ịgbaso.
Ịgafe "nkwenye maka nkwenye maka ihe niile" na-eme ka ndị nchọpụta nwee ajụjụ siri ike: Olee ụdị nkwenye maka ụdị ụdị nnyocha? Dị ka ọ dị, enwere arụmụka bara ụba banyere ajụjụ a, ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ya dị na nchọpụta ọgwụ na oge analog. N'ịkọwa arụmụka ahụ, Nir Eyal (2012) dere, sị:
"The ọzọ ize ndụ aka, ndị ọzọ na ọ bụ a elu-mmetụta ma ọ bụ a definitive 'dị oké egwu, ndụ oke', ihe ọ bụ uru na-atụgbu ma controversial, ndị ọzọ onwe n'ógbè ahụ na etinyeghi ozugbo emetụta, ndị ọzọ ekwekọghị na unsupervised na-eme, na elu mkpa siri ike ụbụrụ bụ. N'oge ndị ọzọ, ọ dị mkpa ka dị nnọọ siri ike ụbụrụ bụ, ma n'ezie, n'ihi na nkwenye nke ọ bụla n'ụdị, bụ nta. N'oge ndị ahụ, elu-akwụ ụgwọ nwere ike mfe akpagbu mkpa ahụ. "[Esịtidem ịma ekwe]
Otu ihe dị mkpa site n'arụmụka a bụ na nkwenye a kwadoro abụghị ihe niile ma ọ bụ ihe ọ bụla: e nwere ụdị nkwenye dị ike na ike. N'ọnọdụ ụfọdụ, nkwenye doro anya siri ike dị mkpa, ma na ndị ọzọ, ụdị nkwenye nwere ike ịdaba. Ọzọ, Aga m akọwa ihe atọ mere ndị ọkachamara ga-eji na-agbasi mbọ ike inweta nkwenye ziri ezi, m ga-akọwakwa nhọrọ ole na ole n'ime okwu ndị ahụ.
Nke mbụ, mgbe ụfọdụ, ndị na-agwa ndị na-agụ ha ka ha nye ikikere nkwenye nwere ike ime ka ihe ize ndụ ha na-eche. Dịka ọmụmaatụ, na Encore, na-arịọ ndị mmadụ bi n'okpuru ọchịchị nchịkwa iji nye nkwenye iji jiri kọmputa ha mee ihe iji nyochaa nyocha nke Ịntanet nwere ike itinye ndị na-ekweta na ihe ize ndụ dị ukwuu. Mgbe nkwenye na-eduga n'inwekwu ihe ize ndụ, ndị nchọpụta nwere ike hụ na ozi gbasara ihe ha na-eme bụ ọha na eze na ọ ga-ekwe omume maka ndị ga-apụ apụ. Ọzọkwa, ha nwere ike ịchọ nkwenye site na otu dị iche iche na-anọchite anya ndị na-etinye aka (dịka, NGO).
Nke abụọ, mgbe ụfọdụ ịmara nkwenye zuru ezu tutu ọmụmụ ihe ahụ amalite nwere ike imebi uru mmụta sayensị nke ọmụmụ ihe ahụ. Dịka ọmụmaatụ, na Contagion mmetụta, ọ bụrụ na ndị na-amụ ihe maara na ndị na-eme nchọpụta nọ na-eme nnyocha banyere mmetụta uche, nke a nwere ike ịgbanwe àgwà ha. Idebe ihe ọmụma site na ndị nabatara, na ọbụna na-aghọgbu ha, abụghị ihe a na-ahụtụbeghị na nchọpụta mmadụ, karịsịa na nyocha nke ụlọ na nkà mmụta uche. Ọ bụrụ na nkwenye ezughị ezu tupu ọmụmụ amalite, ndị na-eme nnyocha nwere ike (ma na-emekarị) ndị nnọchite ọnụ okwu mgbe ọmụmụ ahụ gasịrị. Nchịkọta okwu n'ozuzu na-agụnye ịkọwa ihe merenụ, ịgbagha nsogbu ọ bụla, na inweta nkwenye mgbe eziokwu ahụ gasịrị. Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ arụmụka, ma ọ bụrụ na nbibi dị na nhazi ubi dị mma, ma ọ bụrụ na debriefing onwe ya nwere ike imerụ ndị so na ya (Finn and Jakobsson 2007) .
Nke atọ, mgbe ụfọdụ, ọ bụ ihe na-adịghị mkpa iji nweta nkwenye nke ọma site na onye ọ bụla nke ọmụmụ gị na-emetụta. Dịka ọmụmaatụ, were onye nchọpụta chọrọ ịchọta Bitcoin blockchain (Bitcoin bụ crypto-currency na blockchain bụ ọkwa ọha na eze nke azụmahịa Bitcoin (Narayanan et al. 2016) ). N'ụzọ dị mwute, ọ gaghị ekwe omume ịnweta nkwenye n'aka onye ọ bụla na-eji Bitcoin n'ihi na ọtụtụ n'ime ndị a bụ ndị a na-amaghị. N'okwu a, onye nyocha ahụ nwere ike ịnwa ịchọta ihe atụ nke ndị ọrụ Bitcoin ma jụọ maka nkwenye ha.
Ihe atọ a mere ndị na-eme nchọpụta nwere ike ghara inwe ike inweta nkwenye nkwenye na-enyewanye ikike, imebi ihe mgbaru ọsọ nyocha, na njedebe njikọta - abụghị naanị ihe mere ndị nchọpụta ji agbalị ịchọta nkwenye ziri ezi. Ihe ngwọta m tụrụ aro-ịgwa ndị mmadụ banyere nchọpụta, ịme ka ịpụpụ, ịchọ nkwenye site n'aka ndị ọzọ, iwepụta akwụkwọ, na ịchọta nkwenye sitere n'aka onye nnọchiteanya-nwere ike ọ gaghị ekwe omume n'ọnọdụ niile. Ọzọkwa, ọ bụrụgodị na ndị ọzọ a ga-ekwe omume, ha nwere ike ọ gaghị ezuru maka ọmụmụ ihe a. Ihe atụ ndị a gosipụtara, Otú ọ dị, nkwenye a kwadoro abụghị ihe niile ma ọ bụ ihe ọ bụla, na ngwọta ihe okike nwere ike imezi nhazi nke ọmụmụ nke na-enweghị ike ịnweta nkwenye zuru ezu site n'aka ndị niile nwere nsogbu.
Iji kwubie, kama "nkwenye zuru oke maka ihe niile," ndị nchọpụta kwesịrị, nwere ike, ma na-agbaso iwu dị mgbagwoju anya: "ụfọdụ ụdị nkwenye maka ọtụtụ ihe." N'ikwu okwu gbasara ụkpụrụ, nkwenye ezighị ezi adịghị mkpa ma ọ bụ zuru ezu maka ụkpụrụ nkwanye ùgwù maka mmadụ (Humphreys 2015, 102) . Ọzọkwa, Ịkwanyere Ndị mmadụ ùgwù bụ nanị otu n'ime ụkpụrụ ndị dị mkpa ka ọ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị mgbe ị na-atụle ụkpụrụ omume nyocha; O kwesịghị iji nwayọọ nwayọọ na-emetụta Uru, Ikpe ziri ezi, na nkwanye ùgwù maka Iwu na Mmasị Ọha Mmadụ, otu isi nke ndị ọkachamara na-eme ugboro ugboro n'ime afọ 40 gara aga (Gillon 2015, 112–13) . N'ikwu okwu banyere usoro gbasara ụkpụrụ omume, nkwenye enyere maka ihe niile bụ ọnọdụ na-enweghị atụ nke na-adaba n'ọnọdụ ndị dị ka bombu oge (lee mpaghara 6.5).
N'ikpeazụ, dị ka a bara okwu, ma ọ bụrụ na ị na-atụle na ime nnyocha na-enweghị ụdị ọ bụla nke nkwenye, mgbe ahụ i kwesịrị mara na ị bụ na a na agba ntụ ebe. Kpachara anya. Leruo anya usoro ziri ezi arụmụka na ndị nchọpụta mere iji kụziere ibuo ọmụmụ nke ịkpa ókè na-enweghị nkwenye. Bụ gị ziri ezi dị ka ike? N'ihi na ụbụrụ bụ dị n'etiti ọtụtụ nkịtị usoro ziri ezi chepụtara, unu mara na ị ga-abụ na a ga-akpọ on iji chebe gị mkpebi.